Dagaalka Afghanistan: Maxaad ka taqaannaa ninka magaca dumarka leh ee hoggaaminaya Taliban? | Salaan Media
Dagaalka Afghanistan: Maxaad ka taqaannaa ninka magaca dumarka leh ee hoggaaminaya Taliban?
August 17, 2021 | Published by: Hamse
Ka dib markii uu geeriyooday hoggaamiyihii hore ee Taalibaan, Mullah Akhtar Mansoor, waxaa xilka la wareegay Mullah Hibatullah Akhundzada, oo ah nin magaciisa koobaad uu yahay kan loola baxo gabdhaha ee dalka Afghanistan.
Waxaa lagu tilmaamaa in uu yahay nin aqoon sare u leh cilmiga islaamiga ah, isagoo muddo ahaan jiray garsoore maxkamadeed.
Waxa uu ka howl gali jiray maxkamad ku taallay magaalada Qandahaar, xilligii ay Taalibaan gacanta ku hayeen xukunka waddanka Afghanistan.
Magaca dumarka iyo taariikhdisii carruurnimo
Akhundzada, oo kasoo jeeda gobolka Qandahaar, waxa uu degmada Pnjwayi ku dhashay sannadkii 1961, wuxuuna ka soo jeedaa qabiilka Noorzayi.
Magaciisa koobaad ee Hibatullah waa mid caan ka ah dalkaas oo loo bixiyo gabdhaha kaliya. Soomaalida xitaa magaca ninkan waxay ula baxaan gabdhaha, waxaadna arkeysaa gabdho badan oo la dhoho “Hibo”.
Waa sida adigoo maanta maqashid nin loogu yeerayo Xaliimo, Sacdiyo, Maryam, Xaawo ama Caasho.
Micnaha magacan ee luqadda carabiga ah waa ‘hadiyad’ ka timid Alle xagiisa.
Halkee buu u cararay madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani?
Turjumaannadii ay ciidamada Britain uga tageen Afghanistan oo arrin ay sugayeen loo sameeyay
Dhaqaalo intee dhan ayaa Mareykanka kaga baxay dagaalka Afghanistan?
Hibatullah aabihiis, oo la oran jiray Mullah Maxamed Akhund, waxa uu sidoo kale ahaa aqoonyahan iyo imaamka masjid ku yaalla xaafaddii ay degganaayeen.
Aabihiis waxa uu ahaa nin sabool ah oo aan wax hanti ah lahayn, sida dhul iyo wax kale oo dhaqaale laga sameyn karo.
Akhundzada waxaa cilmiga diinta islaamka soo baray aabihiis, qoyskana waxay markii dambe u guureen magaalada Quetta ee dalka Pakistan ka dib markii ay ciidamadii Soviet-ka galeen dalka Afghanistan.
Waxa uu aaminsan yahay in Taalibaan ay tahay kooxda kaliya ee u qalanta in ay maamusho caalamka.
Waxa uu buugaag badan ka qoray si uu u caddeeyo mowqifkiisa taageerada Taalibaan, isagoo saldhig uga dhigayo aqoonsiita diimeed.
Muxuu uga duwan yahay hoggaamiyeyaashii hore?
Fikradda uu aaminsan yahay awgeed, markii hore waxaa loo arkayay nin qalalaasaha jecel oo aan oggolaan doonin wax wada xaajood ah oo ku qotama aragtida Taalibaan.
Hase yeeshee xaaladdaas wax badan ayuu ka badallay, diyaar ayuuna u ahaa inuu la fariisto dhinacyada ka soo horjeeda.
Inkastoo uu leeyahay mayal adeyg dhinaca diinta ah, haddana waxaa la sheegay in uu aaminsan yahay in siyaabo kale wax lagu xalliyo inta aan dagaal la gaarin.
Mid ka mid ah waddooyinka ugu muhiimsan ee uu Akhundzada aaminsanaa in khilaafka lagu xalliyo waa “wadahadal siyaasadeed”, arrintaasna waxay muuqatay bilihii la soo dhaafay.
Bishii July, 2021, kooxda Taalibaan waxay miiska wadahadalka la fariisteen madaxda dowladda Afghanistan oo ay ku kulmeen magaalada Dooxa, tallaabadaas oo muhiim u ahayd hannaanka nabadda ee dalka Afghanistan.
Doorkiisa dagaallada Afghanistan
Hibatullah Akhundzada ayaa hoggaanka ururka Taalibaan ee Afgaanistaan la wareegay 26-kii May 2016, markaas oo golaha shuurada ee xarakada ay xilkaas u magacaabeen.
Waxa uu baddalay hoggaamiyihii hore ee ururka ee Akhtar Maxamed Mansuur, kaas oo lagu dilay weerrar dhanka cirka ah oo ay 22-kii May 2016-kii ay soo qaadeen diyaada Mareykanka lahaa.
Xogta shakhsiyadeed ee Hebatullah
Hebatullah waxa uu dhashay 19-kii Oktoobar sannadkii 1961, sida lagu sheegay taariikhdiisa lagu shaaciyay barta internet-ka ee rasmiga ah ee ururka Taalibaan. Waxa uu ku dhashay degmada Bajway ee gobolka Gandahaar, waxa uuna ka soo jeedaa qowmiyadda Bashtuuga.
XIGASHADA SAWIRKA, AIP
Qoraalka sawirka, Hibatullah Akhunzada
Akhudnzada waxa uu ka qeybqaatay dagaalladii ka dhanka ahaa xukuumadda Afgaanistaan ee gacansaarka la laheyd Ruushka ee uu hogaamin jiray Maxamed Nuur Tarqi, taas oo xukunka la wareegtay bishii Abriil 1978-kii.
Sida lagu sheegay taariikhda rasmiga ah ee uu ururku shaaciyay. Ugu dambayntii waxa uu isaga baxsaday Afgaanistaan oo waxa uu galay Pakistan-ta dariska ah halkaas oo uu ku noolaa xero qaxooti oo ku taal xadka gobolka Balochistan.
1996-dii, hogaamiyihii hore ee Taalibaan, Mullah Maxamed Cumar, ayaa waxa uu u magacaabay inuu hogaamiyo maxkamadda milateriga ee Kabul, si uu u fuliyo shareecada Islaamka halkaas oo uu ka ciyaaray dowr muhiim ah, sida ay Taalibaanku sheegeen.
XIGASHADA SAWIRKA, MOI
Qoraalka sawirka, Ciidammada xukuumadda oo isku dayaya inay iska caabbiyaan Taalibaan
Markii uu Mareykanka xoogga ku galay waddanka Afgaanistaan dabayaaqadii sanadkii 2001, Akhundzada waxa uu ka qeybgalay dagaalka isagoo weliba hogaamiye ah, mararka qaarka ciidammada isku dubaridi jiray si ay Mareykanka ula dagaalamaan iyo ciidammada kale ee isbahaysiga, sida ay Taalibaanku sheegeen.
22-kii bishii May 2015 waxaa hogaamiyaha Taalibaan Mullah Akhtar Maxamed Mansuur lagu dilay duqeymo dhanka cirka ah oo ay fulisay diyaarad dagaal oo Ameerikaan ah, iyadoo weerrarku uu ka dhacay meel u dhaw magaalada Quetta ee gobolka Balochistan ee koonfur galbeed waddanka Pakistan halkaas oo ku taal xadka Afgaanistaan.
25-kii May 2015 ayaa Taalibaan waxa ay xaqiijisay in hogaamiyahooda Mullah Akhtar Mansuur lagu dilay diyaarad Ameerikaanku uu leeyahay oo weerrar ku soo qaaday waxaana Akhundzada loo magacaabay inuu hogaamiyo ururkaasi.
Afhayeenka ururka Dabiijullah Mujaahid ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku shaaciyay in hogaamiyaha cusub ee ururka lagu go’aamiyay kulan ay yeesheen “golaha shuurada” ee hogaamiyaha Taalibaan.
Shaacintii ugu waynayd waxaa la sameeyay 30-kii bishii July 2016 markaas oo la sheegay in heshiiskasta oo lala galo xukuumadda Afgaanistaan ay suuragelikarto haddii ay isaga harto xulafadeeda ajaanibta, waxaana qofkii bayaankaas shaacinayay uu yiri: “Taageeradiina iyo garabka aad u tihiin dadka soo duulay ayaa ka dhigan in aad ayiddeen wajiyo-xuntii taageeri jirtay Britain iyo Soofiyeetka.”
“Taalibaan waxa ay haysaa barnaamij ay ku midaynayso dalka oo ay ugu hagayso shareecada Islaamka iyadoo albaabada cafiska iyo dambidhaafka ay furan yihiin”.